महिनावारी भएको बेला प्याड लगाउने फेर्ने झन्झटबाट अब मुक्त हुने विकल्पको रुपमा कपको प्रयोग, कसरी लगाउने त ? «
महिनावारी भएको बेला प्याड लगाउने फेर्ने झन्झटबाट अब मुक्त हुने विकल्पको रुपमा कपको प्रयोग, कसरी लगाउने त ?
काठमाडौँ । महिनावारी हुनु प्राकृतिक नियम हो । महिनावारी भएको बेला सरसफाईको अन्त्यन्तै जरुरि हुन्छ ।
महिनावारी भएको बेला कुनै महिलाहरुलाई अत्यधिक पिडा हुने गर्दछ भने कसैलाई कम पिडा हुने गर्दछ । सामान्य दुखाई हुनु भनेको स्वाभाविक हो तर धेरै दुखाई भयो भने तुरुन्त चेकजाच गर्नु पर्दछ । महिनावारी हुदा महिलाहरुले प्राय: प्याडको प्रयोग गर्ने गर्छन । कतिले सफा कपडाको प्रयोगसमेत गर्छन ।
तर प्रविधिको विकाससंगै अनेकौ सजिलो उपायहरुको खोजि गर्दै ‘मेन्सट‍्रुवल कप’ बजारमा आएको छ । झन्झटिलो प्याडको उत्तम बिकल्पका रुपमा यो कप आएको हो। जसको प्रयोग गर्नु प्याडभन्दा निकै सजिलो र स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो मानिन्छ।
यो कप सुरुमा लाउँदा तपाईंलाई अलि अप्ठेरो र हल्का दुखे जस्तो होला तर पछि सजिलो र आरामदायी महसुस गराउँछ । यस कपलाई ४ देखि १० घन्टा लगाइसकेपछि फेरि राम्ररी धोएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई दिनमा तीन–चारचोटि धुनुपर्छ । पहिलो पटक यसको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले राम्ररी तीन मिनेटजति उमाल्नुपर्छ र सफा ठाउँमा सुरक्षित राख्नुपर्छ । यो कप प्याडभन्दा किफायती, आरामदायी, हाइजिनिक अनि वातावरणमैत्री रहेको छ । उमेर अनुसार कपको साइज पनि फरक हुन्छ ।